धेरै समुद्री जस्तै, आज झिंगा व्यञ्जनहरु प्रेमीहरूलाई को मात्र होइन ध्यान, तर पनि वजन गर्न खोज्नेहरूलाई आकर्षित छन्। कसरी उच्च क्यालोरी झिंगा? चाहे उनीहरू स्वास्थ्य को लागि राम्रो हो?
झिंगा आहार: फाइदा र बेफाइदा
गरेको पहिलो प्रश्न सुरु गरौँ। तयारी को विधि आधारमा, को झिंगा मा क्यालोरी फरक मात्रा मा निहित छन्। , 97 साफ र स्थिर - - 95, ताजा - क्यान्ड झिंगा उत्पादन को G 81 किलो कैलोरी प्रति 100, उसिनेर समावेश 60 को रूप देख्न सकिन्छ, कम क्यालोरी झिंगा स्पष्ट: तिनीहरूले धेरै उच्च क्यालोरी कम बोसो पनीर वा आलु छन्। मा विनियोजन गरेको एक बिट पङ्क्ति झिंगा सुदूर भन्नुभयो - प्रति उत्पादन को 100g यो 134 Kcal। मात्र 7-8% - एक आहार उत्पादन रूपमा झिंगा फाइदाको लागि, र एकदम बोसो कम बताए।
झिंगा आहार सुरु गर्नु अघि, समुद्री भोजन यस प्रकारको यसको contraindications छ सम्झना। उदाहरणको लागि, जिगर, थाइरोइड, अस्थमा, एलर्जी rhinitis को रोगहरु भोगिरहेका, conjunctivitis जोखिम लायक छैन। तथापि, तपाईं बिरामी छैन भने पनि यी रोगहरु अझै पनि एक आहार सुरु गर्नु अघि एक डाक्टरसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ।
कुनै कुरा स्वादिष्ट झिंगा हुन सक्छ कसरी, एक आहार तिनीहरूलाई को एक, पाठ्यक्रम, हुन सक्दैन। बन्दागोभी, गाजर, टमाटर, खीरे, सलाद - तरकारी खान। तपाईं पनि ताजा जडीबुटी, प्याज र लसुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर फल झिंगा संग संयोजन सिफारिस छ - नभएसम्म एक अपवाद बनाउन सक्छ हरियो स्याउ र कागति। को जामुन उपयोगी raspberries, cranberries, ब्लूबेरी, स्ट्रबेरी, ब्लूबेरी हुनेछ। यो पनि प्रति दिन तरल कम्तिमा 2.5 लिटर पिउन सल्लाह छ। तरल पदार्थ लागि शारीरिक आवश्यकता, पानी निभाउन सक्छौं झिकिएको दुध, रस। छोटो मा, यसको लागि जाने, र सोही कम क्यालोरी खाद्य पदार्थ संग संयुक्त क्यालोरी झिंगा तपाईं वजन मदत गर्नेछ।
को तरिकाहरू रूपमा झिंगा खाना पकाउने, तर अब त्यहाँ धेरै व्यञ्जनहरु छन्। तिनीहरूले गर्न सक्छन् र खाना पकाउन (सधैं गोले मा), र भुट्नु। यो झिंगे कागति वा कागति को रस संग संयोजन मा प्रयोग गर्न मनमोहक छ। उनीहरूसँग राम्रो जान्छ, र जडीबुटी - साग, डिल, सलाद। कोठा तापमान मा फ्रिज तल तखता पहिलो, र त्यसपछि - किनेको स्थिर झिंगा भइरहेको, तिनीहरूले बिस्तारै defrosted गर्न आवश्यक छ कि सम्झना।
लाभ र झिंगा को हानि
झिंगा को ताप मूल्य के छ, हामी बाहिर पाएका छन्। अब, के झिंगा को उपयोगिता छ। समुद्री यस प्रकारको microelements र भिटामिन, ओमेगा3को एक अधिकता comprises। झिंगा सिलिकन मा स्थित छाला जवान राख्न अनुमति दिन्छ। Taurine मांसपेशिहरु र रक्त नली को लोच राख्छ। Astaxanthin को कक्षहरू र Tissues को विकास मा लाभकारी प्रभाव छ। भिटामिन B6 कोलेस्ट्रल को शरीर छुटकारा मदत गर्छ। पनि झिंगा मा यो थाइरोइड ग्रन्थि को सामान्य संचालन सुनिश्चित गर्न पर्याप्त आयोडिन समावेश गर्दछ। झिंगा लागि pluses आफ्नो शरीर दुई पटक मासु भन्दा छिटो digests भन्ने तथ्यलाई समावेश गर्नुहोस्।
166 मिलीग्राम - धेरै लागि त्यहाँ अन्य समुद्री बीचमा कोलेस्ट्रल को सबै भन्दा ठूलो रकम छ झिंगा मा निहित छ भन्ने जानकारी मा चासो छ। तर फैटी एसिड को एक उच्च सामग्री र एक कम सामग्री संतृप्त बोसो यसको हानिकारक असर neutralize। रूपमा चिकन मासु मा निहित छ रूपमा धेरै - र झिंगा मा कोलेस्ट्रल एकाग्रता अन्य उत्पादनहरु संग तुलना गर्न त उच्च छ।
झिंगा प्रयोग गर्दा कुनै पनि अन्य उत्पादन जस्तै संयमता महत्त्वपूर्ण छ। ज्यादा संग 350 जी जोइन्टहरूमा र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली संग समस्या, को अन्तस्करणले गर्न मात्र होइन एलर्जी, तर पनि हानिकारक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ हुन दिन पर्याप्त छ। त्यसैले आफ्ना खपत मा झिंगा र संयमता को उपयोगिता प्रत्येक अन्य सिधै निर्भर छ कि सम्झना। सबै ठिक्क राम्रो छ!
म स्तनपान संग टमाटर खाने सक्नुहुन्छ?
क्यालोरी आलु केक
पाउडर टावर। प्राग र यसको आकर्षण
नस्ल Siberian Husky को प्रकृति को विवरण। हेरविचार र कसरी लिन कसरी Husky तालिम?
कसरी 30 दिनको लागि थप सुन्दर बन्न। कसरी कक्षाकोठामा भन्दा धेरै सुन्दर बन्न
अन्डा र दूध बिना केक: पाक नुस्खा
मुख्य वर्ण: "गीत गाउने राजकुमार"। Haruka Nanami, Otoya Ittoki, Masato Hidzirikava - एनिमे वर्ण "राजकुमार गीत गाउने"
Sweatpants। महिला र पुरुष मोडेल
, निदान कारण: किन दुख anconeus
ग्रेड Grafskaya उपहार (स्याउ): वर्णन, फल को कैरेक्टराइजेशन
एक निलम्बन असर के हो?
इटाली बीच बिदा: चयन गर्न जो रिसोर्ट?